Ukuqonda ibinzana, ukudweba ukhiye kungaba ezahlukene, okuyi umdwebo ukhiye on abasebenzi, kanye ishidi okulula umdwebo nesithombe kanjani. Cabangela izindlela ezimbalwa posing ukhiye enjalo. clef Treble kuyinto enhle kakhulu ukubukeka, njengoba abaculi bathi, ivula ihubo eshidini amaphuzu futhi siphawula ukuthi uqalile uzwakale.
Udweba kanjani ukhiye on abasebenzi?
Wonke umuntu uyazi ukuthi clef zonxantathu - uphawu umculo, futhi kuyafaneleka ukuthi ukubukeka lihle kakhulu futhi ngesikhathi esifanayo zingase zifane violin.
clef Treble - lena usawoti ukhiye, okulotshiwe emgqeni we stave yesibili. Ukuze wenze kube lula ukudweba lolu hlobo ukhiye, udinga kancane umkhuba, isibonelo ngefomethi ezinkulu kuneminikelo umculo izincwadi. Ungasebenzisa ucezu elula ephepheni ngemigqa ezaziqoshwe umculo izikolo.
Ngokulandelako, cabangela indlela ukudweba clef zonxantathu. Eqinisweni-ke ulula, njengoba unomzimba ezingeyona inkimbinkimbi.
Ukuze uphendule umbuzo indlela ukudweba ukhiye, kubalulekile ukubala umugqa wesibili kusuka phansi. Wafaka ichashaza elincane. Kusukela ke ngizoya uhlobo clef zonxantathu. Ngaphezu kwalokho, ngesineke, ubambe ingxenye nengxenye-indingilizi kwesokudla iphuzu. Ngenxa yalokho, kufanele uthole hook ezincane, okuyinto akufanele ube mkhulu kakhulu.
Ngokulandelayo, esiyithola emgqeni-up, ukuze sidlula zonke izinti umugqa. Ngingabi hook ezincane, okuyinto futhi akufanele kube ubanzi kakhulu. Umugqa akufanele bopha emuva phansi. Waphenduka wabheka la Umugqa wokuqala esinezinkemba nezinduku, okukhiphayo yona ngaphandle, izikhala emhlophe, bese ukoma ichopho.
Yiqiniso, umuntu ngamunye uthola clef ezahlukene zonxantathu, futhi ngokuyisisekelo ifomu yabo incike ukunemba nokunemba yonke imihlangano emigqeni. Kulokhu, kumelwe kushiwo ukuthi uma ubhala imisebenzi umqambi sika kungukuthi ngempela cabanga ngesimo clef zonxantathu, ikakhulukazi uma kwenziwa ekuqhumeni ugqozi lokudala.
Dweba ukhiye ephepheni
Umgomo we iphethini enjalo kuyafana e umdwebo ku zezinti. Ukuze ufunde indlela ongasondela ngayo ukhiye zomculo, ungase futhi usebenzise i-stencil, okuyinto nakanjani ibe wusizo. A-stencil kungenziwa ukusika ngokwakho, kuleso simo kuyoba lula ukubeka sibalo Laphezu ezahlukene, isibonelo, izingubo, iphepha kanye nezinye izinto.
Kuyathakazelisa ukuthi le nkinobho zingathola umbala izinqumo ngokuphelele ezahlukene, futhi ngaleyo ndlela ngisho zisebenzisa mikhondo ezengeziwe. Ngokuvamile abantu axhunyiwe ngomculo, kukhona eziningi izimfanelo ezahlukene, lapho okukhulunywa ngaso ukhiye.
Akunjalo kudala, abantu kuqhathaniswa violin bomculo okhiye, ezifana Bach, Vivaldi, Beethoven, Schubert, Mozart nabanye, futhi kuyafaneleka ukuthi bonke ziyefana sasivame ukubona. Lokhu kungase kube ngenxa yokuthi umqambi kwaba nhlobo isikhathi bagwala clef zonxantathu. Futhi kulokhu, kufanele kusho ukuthi isihluthulelo kulotshiwe njengoba ingxenye lolimi zomculo, ukuze siqonde ukuthi ngendlela futhi kulokho irejista ebhaliwe noma umkhiqizo, ukwakheka kanye umculo. Sinenkosi ezimbalwa, okungukuthi zonxantathu, bass, Alto, tenor, ukhiye Baritone. Ziyahlukahluka kuye kuphela indlela umkhiqizo yakhiwe kanye nokusungulwa.
Njengoba kungaqondakala, okwamanje kukhona eziningi izinto ezahlukene ongazikhetha draw esemqoka efana, kodwa futhi Kuyaphawuleka ukuthi ingasetshenziswa hhayi kuphela ekulotshweni umzimba zomculo noma imisebenzi, kodwa futhi njengoba i-elementi ezingaba ukungezwa imikhiqizo ehlukahlukene, ezifana, isibonelo, izingubo nezinto ne yezicathulo.
Lesi sihloko kuyoba wusizo kulabo abafisa ufunde indlela ongasondela ngayo Ukhiye.
Izimpawu inhlanhla: yini ukubaluleka ezine-leaf clover